Myanmar: Midowga Yurub oo cunaqabatyn saari doona Militariga dalkaas – Kasmo Newspaper
Myanmar: Midowga Yurub oo cunaqabatyn saari doona Militariga dalkaas
Updated - February 25, 2018 1:03 pm GMT
London (Kasmo), Midowga Yurub ayaa diyaarinaya tillaabooyin cunaqabatayn ah oo lagu soo rogayo saraakiisha sare ee Militariga Myanmar, taas oo la xiriirta dilalka Muslimiinta Rohingya ee laga tirada badanyahay.
Ujeeddada Midowga Yurub ayaa ah sidii loo ciqaabi lahaa ciidanka dalkaas, gaboodfallada dartood, iyada oo la saarayo xayiraado cusub oo dhanka safarka iyo hantida ah, sida Maraykanka iyo Canada horey u sameeyeen.
Ilaa hadda lama shaacin liiska magacyada Janannada ciqaabtu ku dhici doonto, laakiin bishii Disembar 2017 Maraykanku waxay xayiraad saareen S/Gaas Maung Maung Soe, oo ka dambeeyay dhibaatada loo gaystay Rohingya. Caadi ahaan liiska Midowga Yurub ee xubnaha tilaabadaan oo kale laga qaadayo wuxuu la mid yahay midka Maraykanka.
Go’aanka Midowga Yurub ee tillaabada noocaan ah wuxuu ka marag kacayaa xaaladda ka jirta Golaha Ammaanka, halkaas oo looga soo horjeedo cunaqabatayn la saaro Militariga Myanmar. Bisha Febraayo, Russia iyo China oo haysta awoodda VETO ee Qarammada Midoobay, ayaa ku adkaystay in xaaladda Gobolka Rakhine deggentahay hadda, gacantana lagu hayo.
Soo-jeedinta Midowga Yurub waxaa looga doodi doonaa kulan caadi ah oo Wasiirrada Arrimaha Dibadda bahdu yeelan doonaan maalinta Isniinta 26ka Febraayo, kaas oo mar 2aad lagu codsan doono siideynta 2 warfidiyeen oo ku xiran Myanmar.
Wa Lone iyo Kyaw Soe Oo oo Myanmar u dhashay waxay u shaqeynayeen Wakaaladda Reuters, waxaana la qabtay 12kii Disembar, iyada oo lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen shuruucda dalka. 2da nin waxay ururinayeen xog ku saabsan tacaddiga loo gaysanayo Rohingya, gaar ahaan dilka 10 xubnood oo maydkooda laga helay god qur ah.
Wasiirradu waxaa kale oo ay ka codsan doonaan Wakiilka Sare ee Arrimaha Dibadda, Federica Mogherini iyo waaxda EEAS (European External Action Service) sidii loo xoojin lahaa xayiraaddii hubka ee Midowga Yurub ku soo rogay dalkaas 90meeyadii.
Israel-India, Duullimaadkii u horreeyay oo hawada Sacuudiga soo maray
Dalalka Afrika oo saxiixay heshiiskii ugu ballarnaa ganacsi xor ah WTO ka dib
Deg Deg: 14 Ruux oo Ku Dhimatay Qarax Muqdisho ka Dhacay
Soomaaliya: Xukuumadda, EU-IOM iyo qorshaha dib u dejinta muhaajiriintii la soo celiyay